သွားကျောက် ခြစ်ခြင်းကို ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ? - Latha Dental Clinic
သွားကျောက် ခြစ်ခြင်းကို ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
ရယ်တဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ သွားကျောက် တွေကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရယ်နိုင် ဖြစ်နေတာမျိုး၊ သွားတိုက်လိုက်တိုင်း သွေးထွက်တာမျိုး၊ စကားပြောမယ်ကြံလိုက်တိုင်း ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိဖြစ်ရတာမျိုး…
ဒါတွေ အားလုံးက သွားကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာတွေပါ။ သွားချေး၊ သွားချိုးလို့လဲ အလွယ်တကူပြောကြပါတယ်။ သွားကျောက်ဆိုတာ စားကြွင်းစားကျန်တွေ၊ တံတွေးမှာပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ အနည်ကျပြီး ဖြစ်လာတာပါ။ သူက သွားမှာ ကပ်တွယ်ပြီး သွားဖုံးအောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း စားသွားပါတယ်။
သွားကျောက်က သွားကို အပေါ်ကနေ ကျောက်နဲ့ တစ်လွှာဖုံးထားသလိုပါပဲ။ ပြီးတော့ ပွယောင်းယောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စားသောက်ထားသမျှ အလွယ်တကူ စွန်းထင်းနိုင်ပါတယ်။ သွားကျောက်တွေက သွားကြားနဲ့ သွားအခြေမှာ ရှိနေတဲ့ အတွက် သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်လာတဲ့အတွက် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတာ၊ အပေါ်ယံကြွေလွှာတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့အတွက် သွားကျဉ်တာ၊ အပေါက်ဖြစ်တာ၊ သွားကျိုးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွားဖုံးရောဂါတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ သွားကျောက်တွေက သွားဖုံးတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ကြာလာရင် သွားဖုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးဖြစ်မှာက သွားဖုံးရောင်တာပါ။
ဒါထက်ပိုဆိုးလာရင်တော့ သွားပတ်လည်အခြေကနေ ရောင်တာ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျောက်ကြောင့် သွားရိုးပါတ်မြှေးရောင်လာရင် သွားယိုင်နဲ့လာပြီး ရေစီးကမ်းပြိုဖြစ်ပြီး သွားတွေ အုံလိုက် ကျွတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက် ဖုံးထားတဲ့ သွားဖုံးဟာ Ucer လို.ခေါ်တဲ့ သွားဖုံးနာ အပေါက်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အတားအဆီးမရှိ ပိုးမွှားတွေ ၀င်ရောက်ပြီး အခြားသော ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ပိုဆိုးရွားစေတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ၊ အဆုတ်ရောဂါရှိသူတွေဟာ ခံတွင်းမှာ ကျောက် လုံးဝမရှိသင့်ပါ၊၊ ဒါကြောင့် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်းကို အနည်းဆုံး ၆လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၁ နှစ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး လိုအပ်ပါက လိုအပ်သော ဆေးဝါးကို ကျောက် မခြစ်မှီသောက်ပြီးမှ ကျောက် ခြစ်သင့်ကြောင်းကိုလဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ လသာ Dental Clinic မှာဆိုရင် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း Treatment အတွက် ဝါရင့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကုသမှုတွေကို ဈေးနှုန်းသင့်စွာ ကုသပေးနေပါပြီ။ ဒီတော့ ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ Latha Dental Clinic မှာ ပုံမှန်သွားကျောက်ခြစ်ကုသပါ။
Tags: Latha Dental Clinic Scaling Teeth (သွားကျောက်ခြစ်ပေးခြင်း)